पोलीलाइन्सबाट कन्टूर लाइनहरू (चरण १) - जियोफुमेटेड
पिललाइनबाट स्तर घटाउने (चरण 1)
अप्रिल, 2010 अटोक्याड-Autodesk, topografia
हामीले कसरी हेर्नुभयो आकृति बनाउनुहोस् फिल्डमा लिइएको पोइन्टको नेटवर्कबाट सुरू गर्दै। अब हामी कसरी हेर्ने छौं हेर्ने छौं, स्क्यान गरिएको नक्शामा पहिले नै अवस्थित कर्भबाट।
जस्तै हामीले गरे सडक डिजाइन, चलो यसलाई चरणहरूमा तोड्न, ताकि पोस्ट लामो समय भन्दा बाहिर आउँदैन सांपको पात.
यसको लागि, यदि तपाईंसँग UTM मा सीमान्त निर्देशांक छन् भने, काम धेरै सरलीकृत छ। यस अवस्थामा, निर्देशांकको छेउछाउको छेउछाउ पत्ता लगाइन्छ, यदि कुनाहरूको छेदनखण्ड भए यो उत्तम हुने थियो।
बिन्दुहरू आदेशसँग सम्मिलित छन् बिन्दु, र एक कमाले छुट्ट्याएको कोरेन्डिन्ट प्रविष्ट गर्दै, तल छविमा देखाईएको छ। पोइन्ट ढाँचालाई प्रतीकमा परिवर्तन गर्न जुन देखिने छ, योबाट गरियो ढाँचा> पोइन्ट शैली। तर सिभिल थ्रीडीका यी संस्करणहरूले मेनू फेला पार्न गाह्रो बनाउँदछ उपकरण, तपाईं पुरानो गर्न सक्नुहुन्छ: ddptype आदेश रेखाबाट, त्यसपछि प्रविष्ट र हामी बिन्दु प्रकार छान्नुहोस्।
यस अजीब भाग मा माइक्रोस्टेशन, जहां एक बिंदु शून्य लम्बाई को लाइन हो, र नक्शा दृश्य संग गतिशील मोटाई हुन सक्छ।
अब हामी छवि घुसाउनुहोस्, प्रयोग गर्दै घुसाउनुहोस्> रास्टर छवि रेफरेन्स। हामी तपाईंलाई छोड्दछौं संभावनाहरू सक्षम गर्न को लागी सम्मिलन बिन्दु y मात्रा स्क्रिनबाट।
त्यसपछि समकक्षको बायाँ तिर एउटा बिन्दु राख्नुहोस् र माउसलाई सार्नुहोस् जब सम्म तपाईं अनुमानित आकारको छवि देख्न सक्नुहुनेछ।
यदि छविले थोप्लाहरूलाई कभर गर्दछ भने, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्। यो संग गरिएको छ उपकरणहरू> प्रदर्शन अर्डर> पछाडि पठाउनुहोस्.
छवि जियोरेन्डिङ गर्दै।
हामीलाई इमेजमा पोइन्टहरू चाहिने छ जुन समन्वयको प्रयोग गरेर हामीले प्रविष्ट गरेको भन्दा बराबर छ। त्यसका लागि, हामी सीमान्त रेखाहरू सामिल हुन्छौं, प्रतिच्छेदनहरू पत्ता लगाउनको लागि।
आदेश प्रयोग गर्दै नक्शा> उपकरणहरू> रबर पाना, किनकि हामीले केहि दिन पहिले प्रयोग गर्यौ परिवर्तन गर्नुहोस्, हामी हरियो पोइन्ट बेसको रूपमा संकेत गर्दछौं, रातो सन्दर्भको रूपमा। जब हामी यो सबै चार संग गरिसक्यौं, तब हामी गर्छौं प्रविष्ट र कमान्डले हामीलाई परिवर्तन गर्नका लागि वस्तुहरू छनौट गर्न आग्रह गर्दछ। हामी गीतहरू लेख्छौं S, विकल्पको लागि चयन गर्नुहोस्, र हामी छवि छान्नुहोस्, त्यसपछि हामी गर्छौं प्रविष्ट अन्तिम पटक र त्यहाँ हामीसँग छ।
के को लागी धेरै समान ताना को रास्टर प्रबन्धक माइक्रोस्टेशनमा। कहिले रोक्ने हामी कसरी व्याख्या गर्छौं georeferencing छवियों Google Earth बाट।
अब कसरी तस्विर रातो थोप्लाहरूसँग मिल्दछ हेर्नुहोस्, हरियोलाई मेटाउन सकिन्छ। अब छवि जियोरेफरेन्डेसन गरिएको छ र उपयुक्त मापनमा डिजिटियसन सुरु गर्नका लागि। यो लिंकमा यो छ तपाइँ2चरण हेर्न सक्नुहुन्छ यो अभ्यास समाप्त गर्न।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो दायाँ माउस बटन
अर्को पोस्ट पिललाइनबाट स्तर घटाउने (चरण 2)अर्को »
Pol जवाफ "Polylines बाट कन्टूर लाइनहरु (चरण १)"
उफ्, मैले यो याद गरेन कि अर्को चरणमा कुनै लिंक थिएन। पोष्टको अन्तमा मैले लेखलाई कसरी हेर्ने भनेर संकेत गरेको छ जहाँ व्यायामको पूरक उल्लेख गरिएको छ।
EDUARDO O'ONONOR भन्छिन्:
धेरै रोचक, यी आदेशहरूले तिनीहरूलाई दैनिक प्रयोग गर्दछ। अर्को स्क्यान स्क्यानबाट क्यान्सर प्राप्त गर्न, म कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
लोराडे मन्डेज भन्छिन्:
नमस्ते, यो विषय धेरै रोचक छ। म यो उपयोगी जानकारी कसरी डाउनलोड गर्न सक्छु?
यो सत्य हो, यो केवल घुमाउने, तराजु र चाल हो। यसभन्दा बाहिर कुनै विकृति छैन, मैले देखेँ।
नमस्ते नमस्ते ... विषय रमाईलो छ, इमान्दारीपूर्वक मैले त्यो आदेश used रबर पाना used प्रयोग गरेको छैन।
जब यो आदेशसँग भौगोलिकरण प्रदर्शन गर्ने हो भने, यदि यसले छविलाई बिर्साउँछ? ओ छवि मात्र स्केलिंग गर्दै।
साथै autocad कागजातका अनुसार, यो अधिकतम4बिन्दुहरू (क्षेत्रको मामलामा) सँग मात्र सम्भव छ यो सही छ? छविको बीच तिर छवि विकृत भएको के हुन्छ भने के हुन्छ?